Marcq Sung wuxuu ku biiray McKnight Janaayo 24, 2022 isagoo ah sarkaal sare oo barnaamij ah oo wata barnaamijka Bulshooyinka Firfircoon iyo Sinnaanta. Doorkan, wuxuu kormeeraa oo uu horumariyaa faylalka deeqaha waxbarasho ee cusub si loo dhiso mustaqbal firfircoon oo loo siman yahay dhammaan dadka reer Minnesota ee leh awood la wadaago, barwaaqada, iyo ka qaybgalka.
Marcq waxa uu u hibeeyey xirfadiisa si uu ula shaqeeyo bulshooyinka isbedelada. McKnight ka hor, waxa uu u soo shaqeeyay maamule istiraatijiyadda barnaamijka iyo horumarinta Sanduuqa Dib-u-maalgelinta Bulshada, USA. Waxa uu abuuray oo uu hirgeliyey barnaamijyo si uu amaah ugu diro oo uu u bixiyo maalgelinta bulshooyinka aan la daboolin ee Maraykanka oo dhan Laga soo bilaabo 2015 ilaa 2019, waxa uu kala soo shaqeeyay Magaalada Saint Paul Waaxda Qorshaynta & Horumarinta Dhaqaalaha isaga oo ah agaasimaha horumarinta ganacsiga, muujinta waddooyinka ganacsiga dhaqanka, iyo Maareeye mashruuc ahaan, isagoo gacan ka geysanaya bilaabista Full Stack Saint Paul, iskaashiga dadweynaha iyo gaarka ah si loo taageero tignoolajiyada diiradda saaraya bulshooyinka aan la adeegin. Waxa uu sidoo kale u adeegay sidii lataliye maaliyadeed ee Maareynta Kheyraadka RBC isagoo xoogga saaraya maalgashiga deegaanka, bulshada, iyo maamulka (ESG), iyo falanqeeye istiraatijiyadeed si uu u cabbiro oo u dejiyo xeelado lagu dhimayo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee Degmada Saddexda Rivers Park ee Plymouth, Minnesota.
Marcq waxa uu dhigtey dugsigii qalin jabinta ee saxaafada iyo isgaarsiinta guud ee Jaamacada Minnesota–Twin Cities waxana uu ku haystaa shahaadada masterka ee maamulka ganacsiga iyada oo xooga la saarayo sii jirista Presidio Gradate School. Waxa uu laba shahaado jaamacadeed ka qaatay Jaamacadda St. John ee cilmiga maamulka iyo xidhiidhka isgaarsiinta. Waxa loo shahaado in uu yahay xirfadle maaliyadda horumarinta dhaqaalaha iyo wariye joogta ah. Intaa waxaa dheer, isagu waa xubin guddiga Isbahaysiga Hogaamiyeyaasha Aasiya Ameerika, oo u adeega Kala duwanaanshaha, Sinnaanta, iyo Wadajirka Padilla, wuxuuna ku jiraa guddiga la-talinta maalgashiga bulshada ee Knight Foundation.
Marcq wuxuu ku dhashay Seoul kuna koray Los Angeles, Marcq wuxuu hadda kula nool yahay magaalada Minneapolis isaga iyo xaaskiisa iyo wiilkiisa. Waxa uu ku raaxaystaa socod dheer oo ku teedsan Wabiga Mississippi saddex ka mid ah afarta xilli.